Raad Raac News Online – Alla Yaa u sheega: Puntland in lagu maqan yahay iyana isku maqantahay !!! Maqaal (Fikirka Akhristaha)
Alla Yaa u sheega: Puntland in lagu maqan yahay iyana isku maqantahay !!! Maqaal (Fikirka Akhristaha)
Faarax December 21, 2012 0
Puntland waa ismaamul Goboleed lagu asaasey fikrad ka timi dadka wada dega Gobolada 8 ah ee ay ka kooban tahay 1998 ka dib shirar badan oo dhexmaray Isimada, Cuqaasha, Aqoonyahahada iyo dhamaan waxgaradka.
Puntland waxaa loo asaasey in ay Soomaali weyn dib u soo celiso qaranimadeeda iyo jiritaankii ay ku lahayd caalamka.
Waxaa Puntland ay leedahay xuduudo aad u tiro badan oo kala dhexeeya degaano farabadan iyo dawlado waa weyn taas oo ay u fududeeynasyo in ay xiriiro fiican la yeelato gobolka iyo degaanadiisa una sameyn karto isku xir Soomaaliya iyo dawladaha dariska la ah.
Puntland waxaa soo maray dawlado kala duwan oo ay soo kala maamuleen madax kala duwan waxaanka mid ahaa
Dawladii ugu horeysay ee uu madaxweynaha ka ahaa mudane C/laahi Yuusuf Ahmed (ALe ha u naxariistee) dawladaas oo qorshaheedu ahaa in ay dadka gaarsiiso nidaamka xisbiyada badan ee dadku ay soo dooranayaan.
Arintaas waxaa u sii dheeraa in ay soo diyaariso dastuur dalku yeesho oo dimuqraadi ah kaas ooo bulshada looga qaadi doono afti dadweyne.
Si kastaba xaaladu ha ahaatee caqabado badan oo jiray iyo maamulka oo markaa la yagleelay ma aysan suurto galin in 3 sano ee lagu dhaqmayey dastuurka ku meel gaarka ah in laga gudbo oo dastuur la helo.
Dawladii markaa xilka haysay waxay soo bandhigtay in wakhtiga loo kordhiyo si ay howlahaas u qabato madaama ay waqtigii ka dhamaadey arintaas ayaa waxa ay sameysay ismaan dhaaf siyaasadeed oo aan laga fiirsan kaas oo keenay in bur bur iyo dib u dhac ku yimaado hanaankii maamul ee Puntland iyadoo isla markaana dawlada loo siyaadiyey 3 sano oo kale halka dad badana ay ka soo horjeesteen in la kordhiyo mudada dawlada.
Mudo markii ay dhibaatadaasi socotay faragalin xaga dawladii dhexe ee Soomaaliyana ay meesha si xoogan uga soo ifbaxdey ayaa waxaa bilowdey dagaal fool xun oo dad badan uga dhinteen dad badan oo aad qaali ugu ahaa Puntland oo tiradooda ay badneyd.
Ka dib wada hadalo iyo muwaafaqo ka timi odayaasha iyo ragii madaxda ahaa hogaanka dawlada iyo mucaaradka ayaa waxaa lagu heshiiyey in dawlada loo kordhiyo 2 sano ka dibna la qabto doorasho dawlada xigtaana ay iyadu ka hawl gasho soo diyaarinta nidaamka dimuqraadiyada iyo axsaabta badan.
Waxaa dawladii xigtay loo doortay Mudane Gen. Maxamud Muuse Xirsi ( Cade) oo ahaa hogaamiyihii garabkii mucaaradka ku ahaa dawladii hore taasi oo ku tusineysa in Puntland ay taalo dimuqraadiyad iyo in xukunku tartan noqdo mar walba.
Waxbadan oo caqabado ah oo soo wajahay dawladii General Cade waxaa ay u saamixi weyday in ay isla markiiba ay dawladu dastuur soo diyaariso, lakiin markii danbe waa ay bilowdey dastuur qabyo qoraal ah waxaana laga ansixiyey golihii wasiirada ee Dawlada Puntland.
Arintaa waxaa ay sababtey in barlamaankii iyo dawladii ay isku qabsadaan xiligii dawlada oo gababo ah kaas oo axdiga ku meel gaarka ahi uu ahaa 3 sano ismarin waagaa waxaa uu ahaa mid ku kooban barlamaanka iyo dawlada nasiib wanaag waxaa soo kala dhexgalay Madaxweynihii dawlada Soomaaliya oo horey u soo noqdey madaxweynaha Puntland waxaana uu hawshii ku soo afmeeray in hal sano loogu daro dawlada mudada axdiga ku meelgaarka ahna laga dhigo 4 sano.
Inta badan bulshada reer Puntland waa ay isku waa faqdey oo waxa ay u hogaansameen taladii Madaxweyne Dawladii Federalka ku meel gaarka ahayd.
Waxaa si sharaf iyo hanaan leh loo qabtey doorosho barlamaani 2009 doorashadaas oo ay ku tartameen akhyaarbadan oo aad u ahaa dad aqoon iyo waayo aragnimo leh kuna haboon hogaanka Puntland. Waxaa ku guuleystay Madaxweyne Dr. Abdirahman Sh. maxamed oo ah madaxweynaha haatan talada Puntland haya.
Wax qabad iyo hawlo badan oo dalka laga qabtey intabadana ay dawladu ku mashquulsanayd sidii Dawlada Soomaaliya dhibta looga saari lahaa markii danbena ay ku guuleysatey in Soomaaliya ay yeelato Dastuur Federali ah iyo Dawlad aan ku meel gaar ahayn.
Isla markaana waxay Dhameystirtay dastuurkii Puntland oo Golaha Wasiiradii ka horeeyey dawladan ay ansixiyeen lakiin u baahnaa shaqo badan in laga qabto laysna waafajiyo dastuurka dawlada Soomaaliya ee Federaliga ah.
Waxa ay ku guuleysatey in labada gole ay ansixiyaan islaa markaana gudi doorashooyin oo madaxbanaan la soo magacaabo gudigaas oo shaqadoodii ka bilaabay dajinta xeer ka doorashooyin iyo furasho axsaabeed looga baahan yahay iyo sidii dustuurka loo ansixin lahaa.
Gudiga doorashooyinka ku meelgaarka ah waxa ay soo bandhigeen shuruudihii iyo xeerarkii doorashooyinka iyo furashada xisbiyada iyo habkii lagu ansixin lahaa dastuurka oo ay ku qorneyd hadii codka shacabka oo dhan aan la qaadi karin daruufo awgeed in cod kooban oo matalaya shacabka reer Puntland iyo degaanadoodaba lagu ansixiyo.
Waxaa hirgalay arintaas oo ay dhamaan reer Puntland isugu yimaadeen 480 xubnood oo erga ah laguna soo dhisay habkii Puntland lagu asaasey ergadii markaa marjacna looga dhigay dhamana Isimadii Puntland soo dhistay iyo waxgaradkii oo dhan.
Waxaa halkaa lagu ansixiyey akhrin iyo isla falanqeyn dheer oo qaadatey maalmo dastuurkii iyo laba lifaaq oo qeexaya in dawlada hada jirtaa ay dastuurkan ku dhaqmi doonto mudada ay xilka haynayaana ay noqoto 5 sano sida dastuurka la ansixiyey uu qabo.
Dastuurkan ansixintiisii yaa markhaanti ka ahaa? waxaa markhaanti ka ahaa dhamaan bulshada reer Puntland qeybahoda kala duwan oo laga soo xulay dhamaan degaanada Puntland, waxaa kaloo ka mid ahaa Isimada Puntland ugu waa weyn, waxaa kale oo ka mid ahaa siyaasiyiin rugcadaa ka ahaa dawladihii hore, waxaa kale oo ka mid ahaa Dawladii ku meelgaarka federalka ahayd ee markaa Soomaaliya ka talineysay iyo Beesha caalamka oo u soo dirsatey wafdi tiro badan oo isugu jiray wakiilo, safiiro iyo qunsulo ka kala yimid dalalka caalamka oo dhan iyo hay’addaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arimaha Soomaaliya oo ay ugu tun weyneyd UNPOS .
Hadaba Maxaa maanta soo siyaaday:
Ma shalaybaa dadku maqnaa mise maanta ayey maqan yihiin? waa arinta u baahan in la iftiimiyo.
Puntland waxaa ay hormuud u ahayd mar walba u ololeynta arimaha Soomaaliya si mar loo helo dawlad Soomaaliyeed oo cadaalad iyo qaranimo abuuri karta loo heli lahaa. lakiin nasiib daro waxaa ay mar walba ku kasbataa arintaas colaad iyo in dhexdeeda la isku burburiyo.
2001 wixii dhacay ee dhibaato ahayd soona gaartey shacabka reer Puntland waxaa ay ku kasbatey Soomaali ha laysku raadiyo oo qarankii dumay dib ha loo yagleeyo.
2012 waxaa dib u soo noolaatay tii shalay dhacdey ee ahayd ninkaad kabihiisa toleyso ayaa kafantaada tolaaya. Ka shaqeynta danaha Soomaaliya iyo dib u soo celinteeda waa caqabada hortaagan dadka danaha gaarka ah leh sidaa darteed Puntland waxay ka soo horjeedaa danaha dadkaas iyaguna waxay rabaan in Puntland waa caqabad ku ah ay meesha uga saaraan !!!!!!!!!! marka rabi talo u daa.
Maxaa la gudboon dadka reer Puntland:
In marka hore la qiimeeyo xaalada maanta aynu ku jirno iyo waxa ina ku gadaaman
In la qiimeeyo sida maanta wanaagii Soomaaliya aan u dooneynay jawaabteenii noqotay.
In la qiimeeyo xaalada ka socota Soomaaliya iyo waxa la damacsan yahay oo ififaalo soo baxayaan.
In aad eegto imisa Cadaw ayaan leenahay indhahana kor loo qaado oo hoos fiirsiga la iska ilaawo.
In la kala saaro qof iyo qaran dan khaas ah iyo mid caam ah.
In la muujiyo Tanaasul kaasoo lagu gaari karo hadafka guud iyo midka gaarka ah
In la wada xeeriyo wixii horey inoo soo maray inaysan maanta dib u soo laaban.
In danaha lagaa leeyahay ay tahay in aad la mid noqoto dadka maanta bur bursan.
In la is bar bar dhigo waxa maanta gacanta inoogu jiro iyo hadii ay burburto waxa ka imaan kara.
10. Midnimadu inay noqoto muqadas siyaasaduna ay tahay shacabka codkooda ayaad wax ku noqonkartaa.
Ala yaa u sheega:
In Soomaaliya aysan weli is rabin wanaagana aan la isu quurin
In nabadu ay tahay geed la harsado colaaduna tahay dab laga cararo
In bur burkaagu faa’iido weyn u yahay inta jiritaankaaga neceb
In nin aan kuu furi doonin uu kuu raro.
In aad haysato iftiin mugdiguna yahay dhibaato qof waliba dhibaysa.
In si fudud wax lagu bur buriyo lakiin dhisideedu ay adkaandoonto
In dhibaatadaadu aysan dhibeyn cidna, adigana ay kugu koobnaan doonto.
In wixii dhaca aan nina ka bad baadi doonin.
In wixii shaley dhacay maanta ay dhici karaan xaladuna ka xumaan karto sidii hore
In maanta nabadu ay qaali tahay noloshuna ay ku xirantahay meel loo caraayina jirin.
FG. waxaa diyaariyey Ururka Wacyigalinta midnimada Puntland (UWMP)
Daneeyaha arimaha Puntland